Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : fampitandremana avy amin’ny hery fiarovana | NewsMada
Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : fampitandremana avy amin’ny hery fiarovana
Efa tsinjo hatramin’ny ela fa tsy ho toy ny teo aloha ka hijery fotsiny amin’izao an’ity korontana misy eto amin’ny fitantanana ny firenena ity ireo hery mpiaro ny filaminana dia ny Tafika sy Zandarmaria ary Pôlisy izany. Nanao fanambarana ny lohan’ny mpisorona mifehy azy ireo, fa rehefa tsy mampiseho fanetren-tena sy fahendrena hanatanterahana ny fepetra napetraky ny HCC ny hery pôlitika dia handray ny andraikiny izy ireo, izany hoe handray ny fitondrana ka fomba miaramila no hitantanana ny raharaham-pirenena. Asa na fahendrena na tsy fahasahiana izany fampilazana izany, raha tany an-toeran-kafa dia efa nanaovan’ny manamboninahitra ambony amboletra ny fisintonana ny fahefana ho eo ampelatanany.
Rehefa tena alalinina dia fahendrena no asehon’ireo jeneraly mifehy ny andian-tafika ireo. Azo lazaina fa tsy izy ireo ankehitriny no mifandrombaka toeram-pitondrana. Izany fanambarana izany dia naman’ny filazana fa na misy aza ny toe-draharaha toy izany dia tsy afaka lazaina ho « fandrombahana fanjakana » na « coup d’Etat ». Toy izany koa ny mikasika an’ilay didy noraisin’ny HCC. Na mazava aza fa ireo fehy ao anatin’ilay fanapahan-kevitra dia mihoatra an’ izay voafaritra ao anatin’ny Lalampanorenana. Tsy miafina intsony ankehitriny fa hany vahaolana dia ny fampiatoana ny lalàna, hany fomba ahafahana manavotra ny maha tany tan-dalàna ny firenena dia ny fanaovana didy manambara ny fampiatoana ny lalànan’andavanandro ary fampiharana lalàna manokana mandritran’ny fe-potoana voafetra. Tsy mbola nisy ny toy izany, ireo manampahefana afaka mametraka izany didy izany moa dia matahotra ny hifoteran’ny didy raisiny.
Tsy vitan’ny hoe ao anatin’ny korontana izao fa tafiditra ao anatin’ny fihatsarambelatsihy, efa any ivelan’ny Lalampanorenana ny sehatra itadiavana vahaolana mbola tsy misy miaiky mivantana an’izany ireo ambaratonga samy hafa tompom-pahefana. Marary ny fanjakana ivelan’ny rafitra no mety ahitana fanafody. Dia mbola sady afenina hoe marary no ho fonomponosina hoe manara-penitra araky ny Lalampanorenana ihany ve ny vahaolana izay tsy fehezin’ity lalàna fototra ity ? Tako-pery sa tako-kenatra ?
Na izany aza, tsy hita tsy ho lazaina ny hafetsifetsin’ireo miaramila ambony, izay noho ny fikasokasohany tamin’ny mpilalao pôlitika dia nahazo traikefa ka lasa kalitalahy koa. Mampisalasala ny mponina ny fanambarany, sady ao anatin’ ny fitondrana izy ireo no miseho aty ivelan’ny sehatra fanaovana pôlitika. Anatra ho an’ny aoriana izany. Mba tsy afangaroaro intsony ny fahefana sivily sy ny fahefana miaramila. Sakamalao sy havozo.